नर्सको तलव : छ महिना भोलेन्टियर पछि मासिक छ हजार ? | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
आइतबार, ३० बैशाख २०७५
रातदिन विरामीको सेवामा खटिने नर्सको मासिक तलव नेपालका अस्पतालमा कति होला ? २० हजार, ३० हजार वा ४० हजार ? होइन, तलव त मासिक छ हजार पो छ । त्यो पनि छ महिना भोलेन्टियर गरेपछि । ‘तर भन्नलाई हामीले अरुसंग १० हजार भनेका छौँ ,’ राजधानीको एक निजी अस्पतालमा काम गर्ने राधिका क्षेत्रीले भनिन् ।
६ लाख बढी तिरेर बीएस्सी नर्सिङ सकाएकी उनले ६ हजारको जागिर पाउन ६ महिना भोलेन्टियर गर्नुपरेको दुखेसो पोखिन् ।
अर्की नर्स विनिता शर्माको तलव भने राधिकाको भन्दा केही बढी छ । उनले मासिक साढे आठ हजार बुझ्छिन् । भन्छिन्, ‘तलव त थोरै नै हो अनुभवको लागि काम गरेकी हुँ । एक बर्ष काम गरेपछि बाहिरको लागि प्रयास गर्ने हो । धेरै तलव त उतै गएर बुझ्ने हो ।’
सरकारी अस्पतालहरुमा भने निजीको तुलनामा सुविधा धेरै हुने गरेको छ । करारमै नियुक्त भएपनि उनीहरुलाई मासिक रुपमा सरकारी सुविधा सरह तलव पाउने छन् ।
तर च्याउसरी खुलेका नेपालका नर्सिङ कलेजहरुले विद्यार्थीसंग मन लाग्दो शुल्क उठाउँछन् । तर अध्ययन सकेपछिको जागिर गर्ने बेलामा उस्तै आपत छ ।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक तारा पोखरेल भन्छिन्, ‘कतिपय अस्पतालहरुले नर्सहरुको सुविधा सामान्य श्रमिकको जति पनि दिएका छैनन् । भोलेन्टियरको नाममा श्रमको शोषण भइरहेको छ । हामीले आवाज त उठाएकै छौँ तर राज्यले त्यसका लागि अनुगमन र कडाई गर्नलाई सहयोग गरिरहेको छैन ।’
उनले नर्सको सुविधाको विषयमा पटक पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै श्रम शोषण नरोकिए सेवा छाडेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइन ।
स्वदेश सहित भारतका विभिन्न स्थानका कलेजबाट बर्षेनी ठूलो संख्यामा नर्स उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै कतिपय निजी अस्पतालहरुले उनीहरुलाई अनुभवको लागि भन्दै स्वयंसेवी नर्सको रुपमा राख्ने गरेका छन् । नयाँ पुस्ताका कतिपय नर्सहरुले पनि विदेशीने चक्करमा स्वदेशका अस्पतालहरुमा भोलेन्टियर वा ज्यादै न्युन तलवमा काम गर्ने गरेका छन् ।